Hlola iQela laseKhaya lamaGalaxi
Siphila ngaphakathi kwegalaxy enamandla ebizwa ngokuthi iMilky Way. Ungayibona njengoko ibonakala ngaphakathi ngaphakathi ngobusuku obumnyama. Kubukeka ngathi ibhanti ephosakeleyo yokukhanya ehamba ngezulu. Kusuka kwinqanaba lethu, kunzima ukuxelela ukuba ngokwenene singaphakathi kwinthalami, kwaye loo mbonakalo yayinezi-astronomers zaphazamiseka kude kube yiminyaka yokuqala ye-20 lama-Century. Kwiminyaka ye-1920, i-nebulae "engaqhelekanga" yaxoxwa kwaye ixutyushwa, kunye nezinye izazinzulu eziphikisanayo ukuba ziyingxenye yecala lethu.
Ezinye zigcinwe ukuba ziyingqimba zodwa ngaphandle kweMilky Way. Xa u-Edwin P. Hubble ebona inkwenkwezi eguqukayo kwi-"nebula ye-spiral" eqhelekileyo kwaye yalinganisa umgama wayo, yafumanisa imilambo yayo yayingekho inxalenye yethu. Kwakunzima ukufumana kwaye kwakhokelela ekufumaneni kweminye imilambo kwindawo eseduze.
I-Milky Way ingomnye wemigqa engama-50 ebizwa ngokuba yiNgingqi yeNgingqi. Akuyena mqhubi omkhulu kwiqela. Zikhona ezinkulu kunye nezinye iindidi ezintle ezingaqhelekanga ezifana neGall Magellanic Cloud kunye nomntakwabo oMnyama weMagellanic Cloud , kunye nabanye abancinci kwiimpawu ze-elliptical. Amalungu eSigqeba saseKhaya abanjwe kunye nokukhangela kwabo kunye kunye kunye kunye kunye. Ininzi imilalane kwindalo yonke ihamba ngokukhawuleza kuthi, iqhutywe yintsebenzo yamandla amnyama , kodwa i-Milky Way kunye nabo bonke aBahlali beNgingqi "intsapho" basondelelene ngokubambisana ukuze bahlangane kunye namandla okudalwa kwamandla.
Izibalo zeQela laseKhaya
Umqolo ngamnye kwiQela laseKhaya linesayizi, ubunjani, kunye neziqhamo. Iindidi zeqela laseKhaya zithatha indawo ye-space malunga ne-10 yezigidi zokukhanya. Kwaye, iqela liyinxalenye yecandelo elongezelelekileyo lemilalane ebizwa ngokuba yi-Supercluster yaseKhaya. Iqulethe ezinye iindidi zeenthalami, kubandakanywa neCorgo Cluster, elinezigidi ezingama-65 zokukhanya.
Abadlali abakhulu beQela leNgingqi
Kukho imilambo emibini elawula iqela lendawo: umkhosi wethu womkhosi, iMilky Way kunye ne-Galaxy Andromeda. Ilala iminyaka emibili nesigidi-ukukhanya-iminyaka kude nathi. Zomibini ziyi-galaxyes ezivaliweyo kwaye phantse zonke ezinye iigalaxi kwiqela lendawo ziboshwe ngokulandelelana kwenye okanye enye, ngaphandle kweminye imbalwa.
IMilky Way Satellites
Iindidi ezibophelelwe kwi-Galaxy Milk Way ziquka iindidi ezinamaqhekeza amancinci, ezizizixeko ezincinci ezinokuthi zineengqungquthela okanye ezingenangqiqo. Ziquka:
Amagquma amakhulu kunye namaMigellanic
Iindidi ezibophelelwe kwi-Galaxy Andromeda zi:
I-Triangulum Galaxy (i-galaxy enkulu yesithathu kwiqela lendawo)
Iimpawu zePisces (ezingacacileyo ukuba i-satellite ye-Andromeda Galaxy okanye i-Triangulum Galaxy)
Amanye amaGalaxi kwiQela laseKhaya
Kukho iindidi ze-"oddball" kwiQela laseKhaya elingenakufakwa "ngokubambisana" kwi-Andromeda okanye iMilky Way. Iingcali zeenkwenkwezi ngokubanzi zibahlalisa ndawonye njengengxenye yommandla, nangona bengengamalungu "aseburhulumenteni" eKomiti yeNgingqi.
Iingqungquthela ze NGC 3109, i-Sextans A kunye ne-Antlia Dwarf zonke zibonakala zidibeneyo kodwa zingekho nakwezinye iindidi.
Kukho ezinye iindidi ezikufutshane ezibonakala zingabandakanyeki nawaphi na amaqela angentla angama-galaxies, kubandakanywa namanye amancinane kunye nezitenxo. A bambalwa abahlukunyezwa ngabakwaMilky Way kumjikelezo oqhubekayo wokukhula wonke amava.
Iibalaxi zisondelelene komnye nomnye ziyakwazi ukudibanisa kwiindawo ezinobumba ukuba iimeko zichanekile.
Ukukhangela kwabo kumnye kubangela ukusebenzisana okufutshane okanye ukudibanisa. Ezinye iindidi ezikhankanyiweyo apha ziza kuqhubeka ziguquka ngexesha elichanekileyo ngenxa yokuba zivaliwe kwimidanso yokuxhasana. Njengoko baxubana nabo banokukrazula. Le nyathelo - umdaniso weemigulane - iguqula kakhulu imilo yazo. Kwezinye iimeko, iillisions ziphela kunye neyegalaxy enye ibamba enye. Enyanisweni, i-Milky Way inenkqubo yokwahlula iindidi ezincinane.
Iimitha zeMilky Way kunye ne-Andromeda ziya kuqhubeka 'zidla' ezinye iindidi. Kukho ubungqina bokuba iMagellanic Clouds inokudibana kunye neMilky Way. Kwaye, kwikamva elikude ne-Andromeda kunye ne-Milky Way iya kudibanisa ukwenza i-elliptical galaxy ebizwa ngokuba yi-Milkdromeda ". Le ngxabano iza kuqala kwiminyaka embalwa yeebhiliyoni kwaye iguqule ngokubanzi imilo yeembini zombini njengoko umdaniso wesivalo uqala. I-Galaxy entsha ekugqibeleni iya kuyidala ibizwe ngegama elithi "Milkdromeda".
Ehlelwe nguCarolyn Collins Petersen .